ရခိုင်သတင်း(ရခိုင်များဖတ်ရမည်) | သန်းဇော်ထက်
လွန်ခရေ (၂၈.၅.၂၀၁၂) ညဇာဖက်(၅) နာရီ ကျော်လောက်က ရခိုင်ပြည် ရမ်းဗြဲမြို့နယ် သပြေချောင်ရွာနိန် ဦးလှတင်ဒေါ်မမြရို့၏သမီး မသီတာထွေး(၂၆)နှစ်ရေ ကျောက်နီမော်ရွာက သပြေချောင်ရွာကိုအလာ ပျောက်နိန်ရေအတွက် မိဖတိကညဉ့် (၈)နာရီကျော်မှာ ကျောက်နီမော် ရဲစခန်းသို့ လားရောက်တိုင်ကေလေး ယင်းရဲစခန်းက ချက်ချင်း ကူညီရှာပီးစော် မဟိခရေအတွက် မိဖတိနန့် သပြေချောင်ရွာက လူကြီးလူငယ်တိ ထွက်ရှာဂတ်တေခါ(၂၉.၆.၂၀၁၂)နိန့် မိုးထဖက်(၉) နာရီအချိန်မှာ ချောင်းဝရွာနန့် ကျောက်ထရံ ရွာကြား ပရဟိတကျောင်း အနောက်ဖက်က ကာရီဘောင်ဆည် အဟောင်းထက်မှာ မြင်မကောင်းရေ ဓါးဒါဏ်ရာတိနန့် သီဆုံးနိန်ကြောင်း တွိရရေလို့ လေးဝတီက သတင်းရဟိပါသည်။
ဖြစ်စိုင်မှာ “မသီတာထွေး တယောက်တည်းပြန်လာရေခါ ကုလားတိက လူဇိုင်းပြတ်တေ နိန်ရာက စောင့်နိန်ပြီးကေ ခန္ဓာမှာဝတ်ဆင်လို့ပါရေ ရွှေတိကို လုယက်ပနာ ဗလက္ကာယပြုကျင့်ပြီးရေနောက် လူမဆန်စွာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ပစ်ခစော် ဖြိုက်နိုင်ရေ’’လို့ ယင်း ရှာခီစော်မှာပါရေ ရွာလူကြီးတယောက် အဆိုအရ သိရပါရေ။
အဂုအခါ မသီတာထွေး ရုပ်အလောင်းကို ကျောက်နီမော်ဆီးရုံ ရင်ခွဲရုံမှာ စစ်ဆီး နိန်ရေလို့ သိရပြီးကေ မသင်္ကာရေ ကျောက်ထရံကုလားရွာက ထွက်ပြီးလားရေ မုဒိန်းကောင်လို့ ယူဆလို့ရရေ ကုလားတကောင်းကို ဖမ်းဆီးထားရေလို့ ကျောက်နီမော်ရဲ စခန်းက လေးဝတီကို အတည်ပြုပြောကြားပါရေ။
“ပျောက်လို့တိုင်လာရေခါ ကျွန်တော်ရို့ လေး လူငယ်ချင်းချစ်လို့ကြိုက်လို့ လိုက်လားရေလို့ ထင်ပါရေလေ၊ မိုးလင်းလို့ ရွာသားတိက အလောင်းတွိရေပြောခါမှ လိုက်လားခီဂတ်စော်ဘာ’’လို့ တာဝန်ကျ ရဲအရာဟိက ပြောပါရေ။
သူကဆက်လို့ “ရိုးရိုးလုယက်မှုမဟုတ်ပါ။ ကျူးလွန်ပြီးကေ ဗလက္ကာယပြုကျင့်ထားရေ။ နောက်လူသတ်တေ။ ဒေ ဖြိုက်စိုင်တိရေ သာမညမဟုတ်ပါ တရားခံတိရေ အတွိအကြုံဟိရေလူတိ သွီးအအီးနန့် ရက်စက်သတ်ဝန့်ရေ။ လိုင်ကိုလှီးထားပြီးကေ ညာဖက်ပက်ခုန်းမှာ ဓါးခွတ်ရာ ရင်ဖတ်တိမှာ နောက်ကုန်းမှာ နာရွက်လေး ပြတ်နိန်ရေ။ တရားခံတိရေ မူးယစ်ဆီးဝါး သုံးစွဲထားရေ။ တရားခံ မူဆလင်ကုလားတယောက်ကို ဖမ်းထားဗျာယ်။ သူလေးထွက်ဆိုဘာရေ ကျူးလွန်ရေလို့”ပြောပြပါသည်။
သီဆုံးလားရေ ရခိုင်အမျိုးသမီးချေမှာ လက်ဝတ်လက်စား ရွှေဆွဲကြိုး ရွှေနားဂပ် လက်စွပ်တိပါလားခကြောင်း၊ ဆွေးမျိုးတော်စပ်သူ တယောက်ကလေး ရွှေက(၂)ကျပ်နိန်းပါး ဟိကြောင်း ပြောပြသည်။
အဆိုပါ လူယက်ပြုကျင့် ကျူးလွန်ခရေ အတွက် ကျောက်နီမော်မြို့နယ်တဝိုက်မှာ လူထုအုံကြွမှု ကုလားရခိုင်ပြဿနာ ကြီးထွားဖို့ မဖြိုက်အောင် ရဲစခန်းမှူး မြို့ နယ်မှူး ကျောက်ဖြူခရိုင်မှူးတိ အားလုံး ရောက်ဟိနိန်ပြီးကေ လုံခြုံရေးတိ တင်းကျပ်အောင် ချထားကြောင်းလေး သိရပါသည်။
တရားခံကုလားစုတ် နောက်နှစ်ကောင်ရေ ထွက်ဗြီးနိန်ရေလို့လေး သိရပြီးကေ နာမေမဖေါ်လိုရေ ရဲဝန်ထမ်းတယောက်က ယင်းကုလားရွာနားမှာ လူယက်မှုတိ ရက်ပြတ်ဖြိုက်တေ။ တိုင်လာကေ ငွေနန့်ရှင်းပစ်တေ။ ရဲစခန်းမှုးတိက ဗမာလူမျိုးတိဆိုခါ ချင်ရေပိုင်လုပ်နိန်ဂတ်တေ။ ဒေဂုလေးမပြောတတ်ဗျာယ်’’လို့ ပြောပါသည်။
လေးဝတီက ကျောက်နီမော် ရဲစခန်းမှုးကို အချိန်အကြာကြီး ဆက်သွယ်ခကေလည်း ရိုးရိုးတာဝန်ကျ ရဲသားတိက စခန်းမှုး အစည်းအဝေးလားခကြောင်း အကြောင်းပြန်ရေအတွက် ဆက်သွယ်မှုမရခပါ။
ယင်းလူသတ်မှုရေ ရခိုင်ပြည်မှာ သွီးပျက်ဖို့ကောင်းရေအမှု။ စိတ်မချမ်းသာစီရေအမှုလို့ ဒေသခံတိပြောကြားနိန်ကတ်ကြောင်း သိရပါရေ။ လေးဝတီက အမှု၏ နောက်ဆက်တွဲ အချက်အလက်တိကို ဆက်လက်စုံစမ်းနိန်ပါသည်။
Posted by Than Zaw Htet at 7:45 PM
မြန်မာစာ သတ်ပုံမှန်အောင် အရင်ရေးကျင့် ပြီးမှ အွန်လိုင်းပေါတက်ပါ
Than Zaw Htet said...
ပေါနဲ့ ပေါ်ကိုတောင် သေချာခွဲခြားမသိသေးဘဲနဲ့ သူများကိုဆရာလုပ်တာ
သတ္တိရှိရင် နာမည်ထားခဲ့ပါလား ကိုယ့်လူရယ်....
အော်...ဒါနဲ့ ရခိုင်စာကို ဖတ်တတ်အောင်လည်း လေ့ကျင့်လိုက်ပါအုံးနော်...။
ကာကွယ်ရေးကကော ပြည်သူ၊ကျောင်းသား၊သံဃာတွေကိုနှိမ်နင်းဖို့ထားတယ့် ညှင်းပမ်းရေးအဖွဲ့လား လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာနိုင်ငံခြားသားတွေအတွက်လား ပြည်သူတွေအတွက်ကာကွယ်ပေးဖို့မေ့နေတာလား ခင်ဗျားတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပဲ လွှတ်တော်ခေါ်နေတော့မှာလား၊အမျိုးဘာသာသာသနာအတွက်လုပ်ပေးဖို့စိတ်ကူးကောရှိသေးရဲ့လား၊တပ်မတော်ကို ထိုးစစ်မဆင်ခိုင်းဘဲ သံတမံရေးအရဒီကုလားတွေကိုလုပ်လို့ရမယ်ထင်နေတာလား၊ဒါမှမဟုတ်ကုလားကြီးနဲ့အရာကြီးကိုဖင်တုန်နေတာလား၊နိုင်ငံခြားရေးဌာနကကောသွားသွားလာလာအဆင်ပြေစရာကိစ္စရှိနေတာကြောင့်လက်ရှောင်နေတာလား။
တိုင်းတပါကိစ္စကိုခင်ဗျားတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးထင်ယင်လည်း ပြည်သူတွေကိုလက်နှက်တပ်ဆင်ပေးလိုက်ပါ လူမျိုးအချင်းချင်းသစ္စာစောင့်သိစေလိုပါတယ်
ဘုရားမှာ တံခွန်တိုင် နဲ့ လူခြင်္သေ့ထားရတဲ့ အကြောင်း
Our Buddha's religion must be spread all over the world.
Universal True or ( Dhammapada ) 14
ရခိုင်ပြည်နယ် ရန်ပုံငွေအတွက် အငြိမ့် ကပြမည့်နှင်းဆ...
မိဘနှင့် သားသမီး (၃)
Universal True or ( Dhammapada ) 13
Universal True or ( Dhammapada ) 12
မိဘနှင့် သားသမီး (၂)
ရိုဟင်ဂျာကုလား ၉၀ ကျော်ကို လ၀ကမှဥပဒေဖြင့် သံတွဲတွင...
တိပိဋကကျောင်းမှာကျင်းပတဲ့ ဒေါက်တာ အရှင်ကောဝိဒတရားပ...
ရခိုင် မြောက်ပိုင်း တွင် ရေကြီး ၊မြေပြို ပြီး လယ်ယ...
Universal True or ( Dhammapada ) 11
ကယ်ဆယ်ရေးအတွက် UAE ရောက်မြန်မာများ (CCIC)Company အ...
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းကျောင်းသားပေါင်း ၁၈၀ ကျော်ကို နေ့စဥ...
ရခိုင်ပြည်က မြန်မာပြည်သူများကို ကူညီရန် ဆန်ဖရန်ဘေး...
ရခိုင် ဆူပူမူကြောင့် ဘင်္ဂလာ ဒေခ်ျ့တွင် သောင်တင်နေသူ...
Universal True or (Dhammapada) 10
Universal True or ( Dhammapada ) 9
Conditions and Event of Rakhine State
ရခိုင်အရေးတွင် အစိုးရက ဒိုင်လူကြီးလုပ်မည်ဟု ကယ်ဆယ်...
Universal True or ( Dhammapada ) 8
please, save to our world .
Universal True or ( Dhammapada ) 7
Buddha FM Web-Site
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ပဋိပက္ခဖြစ်ရပ်များ...
ရခိုင်ပြည်နယ်ပဋိပက္ခနှင့်ပတ်သက်၍ သံဃာ့ဆန္ဒကို ကြေငြ...
Universal True or ( Dhammapada ) 6
New From Rakhine State
Universal True or ( Dhammapada ) 5
Universal True or ( Dhammapada ) 4
we should die or they should die ?
စစ်တွေ RNDP ပါတီဝင်များ အဖမ်းခံရ
မသီတာထွေးအမှု တရာခံများအား သေဒဏ်ချမှတ်
Early Morning News from Rakhine (18.06.2012)
Take Care Everybody , Wake Up Everybody
Good New for Yangon
Photos From Rakhine State ( 17.06.2012 )
Burmese from Thailand claim to solve the problem o...
Universal True or ( Dhammapada ) 3
Problem , Trouble , Mistake
Universal True or ( Dhammapada ) 2
Ma Thitar Htway's Case will be pass Judgement on c...
Universal True Or ( Dhammapada ) 1
Danger for us ( Danger for Rakhine )
First think and then do. ( I mean all )
Thinking of U Win Tin on the Problems of Rakhine S...
Dialogue of Daw Aung San Su Kyi at ILO
ရခိုင်သဟာရအသင်းကြီး (ရန်ကုန်) တွင် ရခိုင်ဒေသဒုက္ခသည...
Fresher Welcome Of Sitagu World Buddha University ...
စစ်တွေ မှာ စားနပ် ရိက္ခာ ပြတ်လပ်
Good New For Rakhine
The Early Morning New From Rakhine (14.06.12)
Are u working for Rakhine or Rohinga ?
Latest News From Rakhine (13.06.2012)
Request For Rakhine State
Early Morning News From Rakhine State (2)
Early Morning News From Rakhine State
Short News From Rakhine State
The Latest News From Rakhine (12.06.12)
News From Rakhine State (4)
စစ်တွေမြို့ ရွာသာယာကျေးရွာကို ဘင်္ဂလီများ မီးရှို့ဖျက...
News From Rakhine State (3)
News From Rakhine State (2)
News From Rakhine State (1)
Essential New For Rakhine (Especially For Thandwe)...
The latest photos from Rakhine totally
ရခိုင်ပြည်နယ် ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ဒုက္ခသည် တစ်သေ...